छोरी मानेकी सपनाको गोप्य फोटो आफ्नो मोवाइलमा किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ !’ भन्दै दिए चेतावनी (भिडियो हेर्नुस्) – Ujyaalo Patrika
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय विनयजंग बस्नेत र सपना रोका मगरको सम्बन्धले सोशल मिडियामा निकै नै स्थान पाईरहेको छ । उनीहरुको विषयमा उनीहरुसंगै काम गरेकादेखि लिएर उनीहरुलाई नजिक र केही टाढैबाट चिन्नेहरुले उनीहरुको बारेमा धेरै टिकाटिप्पणीहरु गरिरहेका छन् । कतिले विनयजंग बस्नेतले सपनालाई छोरीकै दर्जामा राखेको बताउँदै आईरहेका छन् भने कतिले सपनाले पनि मिल्दासम्म विनयजंगको हरेक कुरा मानेको र अहिले कुरा नमिल्दा विनयजंगको खेदो खनेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
अरुले जस्तै यो विषयलाई नजिकैबाट नियाल्दै आएकी आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने शर्मिला वाईवाले पनि आफ्नो भनाईहरुलाई थुप्रै मिडियामा मार्फत प्रस्तुत गरेकी छन् । शर्मीलाले कतै सपनाको पक्षमा बोलेकी छन् कतै सपनालाई पनि दोषी ठह्रयाएकी छन् । उनले विनयजंगलाई त कुकुर नै भनेर सम्बोधन गरेकी छन् । उनको भनाई अनुसार यतिबेला बेवारिसे तथा पुनरउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष भएर काम गर्दै आई रहेका विनयजंग बस्नेतलाई सामाजिक काम गर्नबाट बञ्चित गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।
उनले सपना रोकालाई पनि विनयजंग बस्नेतसंग काम र कुरा मिल्दासम्म सबै कुरा सहमतिमै गरेको र अहिले आफुमाथि बुवा भनिएर चिनिएका विनयजंगले यौ ‘न दु’व्र्य’व’हा’र गरेको भन्ने आरोप लगाउनु पनि सरासर गलत भएको बताएकी छन् । यस अर्थमा शर्मिलाकै भनाईलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्ने प्रयास यदि गर्ने हो भने सपनाका बुवाआमाले विनयजंगमाथि लगाएको आरोप केवल कुरा नमिल्दाकोलागी बनाईएको जालसाँजी मुद्या मात्रै हो ।
के थियो सपनाको बुवा आमाको आरोप ?
सामाजिक संजालमा यी कुरा आएपछि सपनाले के भनिन् ?
‘म मौन बसेको छु यस्को अर्थ यो होइन कि म गलत छु । मैले मुख खोल्दा सत्य बाहीर आउने र नखोल्दा नआउने यो पक्कै होइन । सत्य त एकदिन बाहीर आउँछ आउँछ । त्यसकालागी मैले मुख नै खोख्नु पर्छ भन्ने छैन । मैले मुख खोलर कसैलाई नराम्रो हुन्छ भने म मेरो मुख खोल्नै चाहान्न ।’ यो भनाई हो तीन करोड नेपाली जनाताको ढुकढुकी सपना रोका मगरको ।
सपनाले भनेकी छन्,‘मलाई माफ गर्नुस् मेरो मौनताले यदि कसैलाई चोट लाग्दैन र आत्मासम्मानमा ठेस पुग्दैन भने म मौन नै बस्न रुचाउँछु । तर यसको अर्थ यो होइन कि म गलत छु । म गलत छु छैन यो त समयले भन्ने कुरा हो । किनभने समयभन्दा बलवान यो संसारमा अरु केही छैन । जस्ले एकदिन अवश्य पनि सत्यको जीत गराएरै छाड्छ ।’ सपनाले आफुलाई धरातल बिर्सियो भन्नेहरुलाई पनि चोटिलो जवाफ दिएकी छन् ।
उनले आफ्ना परिवारले समेत विश्वास नगरेको बेलामा आफुले ल्याएर बीबीसीको शक्तिशाली महिला हुने अवस्था सम्म पुर्याएको दावी गरेका छन् । उनले आफ्नै कारणले नै सपना त्यो अवस्थामा पुगेको उनको दावी छ । भिडियो तल हेर्नुहोस
Previous सनी लियोनीमाथि २९ लाख भारु ठ’ गी गरेको आ’रो प
Next कस्तो नि’र्दयी संस्कार ! जहा युवतीको यो’नी, छे’दन गरिन्छ . . .